Homeसमाचारजाँदा-जाँदै रवी लामिछानेले भने: अन्तिम र मुख्य रिʼपोर्टमा नै कैचि लाइयो, देशको लागी प्रधानमन्त्री बन्न तयार छु (भिडिʼयो हेर्नुहोस्)
January 22, 2021 admin समाचार 4094
५ सेप्टेम्बर सन् १९७४ मा भक्तपुरको बागे’श्वरीमा जन्मिएका रवि लामिछाने किशोरावस्थामै का’र्यक्रम चलाउँथे । दाजु हरिशरण लामिछाने रेडियो नेपालका समाचारवाचक हुनुले उनमा आवा&जको दुनियाँमा काम गर्ने प्रेरणा मिलेको थियो । तर, उनी देशभित्र लामो समय बसेनन् । मिडियामा काम गरि’सकेका उनी मिडियामै काम गर्नेगरी स्वदेश फर्किए । गिनिज बुकमा नाम लेखाउने देखि जनताको समस्या उ’ठाएर चर्चामा आए । चर्चासँग पटक पटक विवा’दमा आएका उनी हिरा’सतसम्म पुगेर धरौटीमा रिहा भए । उनको आरोह र अव’रोहले भरिएको जीवन यस्तो छ ।
रवि लामिछानेले आफ्नो प्रार’म्भिक शिक्षा भृकुटी माध्यमिक विद्यालयबाट लिए । एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा उ’त्तीर्ण भएका उनी प्रतिभाशाली छात्रका रुपमा चिनिन्थे । विद्यालय जीवनमा साहित्य र कलामा समेत लागेका थिए । विद्यालय जीवनपछि उच्च अध्ययनको लागि रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्प’समा भर्ना भएका थिए । तर, आइएभन्दा माथिको अध्ययन गर्न सकेनन् । त्यसपछि उनी अमेरिका बसाईँ सरे । संयुक्त राज्य अमेरिकाको बसाईमा फास्ट–फूड चेन जस्ता वि’भिन्न क्षेत्रमा व्यवस्थापकको रूपमा काम गरे । बोल्न सिपालु र आकर्षक जीउडालका उनी त्यहाँ पनि नेपालीहरुमाझ लोकप्रीय थिए ।
रवि लामिछानेको व्यक्तिगत जीवनका सुख दुःख उत्तिकै रो’चक छ । विद्यालय जीवनमै प्रेममा परेका थिए लामिछाने । उनले आफ्नै स्कुल जीवनकी प्रेमिका इशा लामिछानेसँग किशोरावस्थामै विवाह गरेका थिए । उनीहरुका दुई छोरी पनि छन् । सन् २०१८ मा उनीहरुले २५ वर्षको वैवाहिक सम्ब’न्धको अन्त्य गरे । यसले निकै चर्चा पायो । रवि र इशाबीच मिडियामा जु’हारी जस्तै पर्यो ।
सँगै जि’उन कसम खाएको जोडीले २५ वर्षको वैवाहिक जीवन अन्त गर्नुमा एक अर्कालाई दोषी देखाए । रवि स्वेदश फर्किए, इशा अमेरिकामै बसिन् । रविसँग अमेरिकाको ग्रीन’कार्ड भएको विषय बाहिर समेत आएको थियो । तर, उनले पछि ग्रीनकार्ड त्यागेको घोष’णा गरे । उनी सन् २००७ देखि २०१७ सम्म अमेरिकी नागरिक रहेको तथ्य भेटिन्छ । एक दशक अमेरिका बसाईँपछि फर्किए’पनि उनले ग्रीनकार्ड छाडेका थिएनन् ।
यो विषय बाहिर आएपछि उनले ग्रीनकार्ड त्यागे’को घोषणा गर्दै नेपाली हरियो पासपोर्टमा विदेश यात्रा गरेको सार्वज’निक गरेका थिए । रविको धेरै महिलासँग नाम जोडियो । जसमध्ये लोकप्रीय नायिका करिश्मा मानन्धर पनि हुन् । करिश्मासँग उनी अमेरिकामा लिभिङ टुगे’दर बसेको विषय समेत बाहिर आयो । करिश्मालाई पत्रकारहरुले समेत यसबारे प्रश्न सोध्ने गर्थे । रवि लामिछाने हिरा’सतमा हुँदा उनको समर्थकहरुलाई करिश्माले भेडाको संज्ञा दिएर ट्वीट गरेकी थिइन् ।
२०१९ मा रविले चलचित्र विकास बोर्डकी पहिलो महिला अध्यक्ष निकिता पौडेलसँग विवाह गरे । निकिता पनि पार’पाचुके गरेर बसेकी थिइन् । उनको पनि छोरी छिन् । दुवैजनाले मन मिलेपछि विवाह गरेका थिए । दुवैले अदालती विवाह दर्ता गरी हिन्दु परम्परा अनुसार विवाह गरे । यो विवाह नेपालमा भएको चर्चित विवाह’मध्येको हो । निकिता चलचित्र निर्माता तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता उद्धव पौडेलकी छोरी भएकीले पनि विवाहले चर्चा पायो ।
रवि लामिछाने जोखिम मोल्ने सेलि’ब्रिटी हुन् । उनले २०१३ अप्रिल ११ देखि १४ सम्म टिभीमा लगातार ६२ घण्टा १२ मिनेट टक शो चलाएर विश्वमै सबैभन्दा लामो समय कार्य’क्रम प्रस्तुत गरेर गिनिज बुकमा नाम लेखाए । बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल शिर्षकमा टक शो चलाएर रवि चर्चामा आए । सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग चलाएर चर्चा बटुलिसकेका उनलाई गिनिज बुकमा नाम लेखाउने टक शोले लो’कप्रीय बनायो । त्यसपछि सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमले लोकप्रीयताको शिखरमा पुर्यायो ।
चर्चित टेलिभिजन प्रस्तो’ता रवि लामिछाने न्यूज २४ टेलिभिजनमा अन्तिम कार्यक्रम गर्दै विदा भएका छन् । सो टेलिभिजनमा ‘सिधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चलाउँदै आएका उनी आज अ’न्तिम कार्यक्रम गरेर बिदा भएका हुन । जाँदाजाँदै उनले ५ वर्ष काम गरेको संस्था छोड्नु पर्दा दुख लागेको बताएका छन र आफ्नो अन्तिम कार्यक्रमको अ’न्तिम र मुख्य रिपोर्टमा नै कैचि लागेको बताएका छन । आज फेसबुकमा एक स्ट्याटस पोष्ट गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन,- “दुख लाग्यो…५ वर्ष काम गरेको संस्था छो’ड्नु पर्दा दुख लाग्यो। अन्तिम कार्यक्रम Live गर्न नपाउदा दुख लाग्यो, अन्तिम कार्यक्रमको अ’न्तिम र मुख्य रिपोर्ट नै का,टिएकोमा झन दुख लाग्यो। हाम्रो टिमले तयार पारेको अन्तिम रिपोर्टमा के थियो त जुन प्रशा’रण गरिएन? त्यो सामग्री पोष्ट गर्दैछु।” त्यस्तै जाँदाजाँदै उनले सञ्चारमाध्यममा बोल्दै आफू देशको लागी प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएको बताए’का छन । – हेर्नुहोस् भिडियो
‘चल्यो मायाको बतास’मा दिलिप र आशिष्माको जोडी (भिडियो हेर्नुहोस्)
जंगलमा १२ बजे राति चि’हान खनेर मान्छे निकाल्दा भयो यस्तो, आत्मा बोल्दा गाउलेको भागाभाग (भिडियो हेर्नुहोस्)
October 17, 2020 admin समाचार 7798
May 12, 2021 admin समाचार 3367
आज राति ‘भ्वाईस अफ नेपाल’ आउँछ कि आउँदैन ? न’कराउट राउण्डबारे शुसिल नेपालले य’स्तो भने (भिडियो हे’र्नुहोस)
May 28, 2021 admin समाचार 2755
अघिल्लो साता छा’याँकन एपिसोडहरु सकिएपछि भ्वाईस अफ नेपाल प्रसारण भएन । त्यससँगै धेरै दर्शक, श्रोताहरुले कौतुह’लता जनाए, आज र भोली नक’आउट चरण आउँछ कि आउँदैन । यसैबिच कार्यक्रमका प्रस्तोता तथा निर्माण शुसिल ने’पालले यस्तो लेखेका